6 egbu egbu atụmatụ maka Android 5.0 Lollipop Ị Pụrụ Ịbụ na Mara
> Resource> Android> 6 kasị akpali akpali atụmatụ maka Android 5.0 Lollipop Ị Pụrụ Ịbụ na Mara
E nwere otutu isi na obere atụmatụ ke ika ọhụrụ Android 5.0 Lollipop. Na ụfọdụ ndị atụmatụ maa ga-agbanwe ụzọ ị na-eji gị Android igwe na mbadamba. N'etiti atụmatụ ndị a, e nwere 6 kasị akpali akpali atụmatụ ị nwere ike amaghị ma ị na-kwesŽrŽ mara ma ọ bụrụ na ị chọrọ welie gị mobile ndụ. Ka na-ele anya na ha.
* Atụmatụ 1: UKWAS IR ebe
Otu n'ime ụzọ ka ị na-Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị mma bụ ịgbakwunye paswọọdụ igbachi ya. Otú ọ dị, adịghị anya ị ga-ahụ na ya n'ezie na-ewe oge Ị kpọghee ekwt ya mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla ị chọrọ iji ya. Nke a na ika ọhụrụ mma 'Tụkwasịrị Obi Ebe' na Android 5.0 Lollipop solves nsogbu n'ihi na ị. Ị nwere ike ịtọ a usoro nke nchebe ebe, dị ka na ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ, na-gị Android ngwaọrụ unlocked. Mgbe ọ bụla ị na-tụkwasịrị obi ebe, mkpọchi ihuenyo ga-nkwarụ. Mgbe ị na-ahapụ ebe, mkpọchi ihuenyo ga-reactivated.
* Atụmatụ 2: ọbịa na onye ọrụ
Na Android 5.0 Lollipop arụnyere na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ị ga-dịghị mkpa ka nchegbu banyere nzuzo gị na-leaked mgbe agbazinye na ngwaọrụ ndị ọrụ ibe ma ọ bụ enyi. Android 5.0 eme ka i nwee setịpụrụ a ọbịa ọrụ akaụntụ site na swiping ala si n'elu ihuenyo ugboro abụọ na-emeghe Quick Ntọala panel. Kpatụ okirikiri na akara ngosi na ikike enweta 'Ọbịa'. Na ọzọ 'ihuenyo pinning'-enyere gị aka magide a screenshot maka a ọbịa na onye ọrụ iji ngwaọrụ gị naanị na ọrụ ahụ: System Ntọala> Nche> swipe ihuenyo pinning Gbanye. Kpatụ-adịbeghị anya égwu Key> chọta ihuenyo ị chọrọ magide na enweta na pushpin akara ngosi.
* Atụmatụ 3: mkpa ngosi mode
Otu nke ika ọhụrụ Android 5.0 Lollipop mma bụ usoro ọhụrụ mkpa ngosi mode - ekwe ka ị na melite 'adịghị ichegbu' mwube gị mbadamba nkume ma ọ ekwentị. Mgbe idebe ya, ị ga-nanị na-amara gị ọkwa na ihe ndị kasị mkpa Ịma Ọkwa n'ime a kpọmkwem oge. Ka ihe atụ, n'abalị, ị pụrụ nanị ekwe ka ekwentị na-eme ka a ụda mgbe ndị mụrụ gị na-akpọ. Iji Mee ya, ị ga-mkpa pịa olu elu ma ọ bụ olu ala isi> mgbata 'Ibu ụzọ'> Tọọ oge> enweta gia akara ngosi maka 'Ibu ụzọ interruptions naanị'> ike gị n'elu-ebute ụzọ maka ihe, ncheta, oku na ozi, wdg
* Atụmatụ 4: ngwa ngwa IHE Ịma Ọkwa
Android 5.0 Lollipop emewo ka a ọhụrụ mma, ime ka ị ngwa ngwa-emekọ a ngosi ọbụna na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ihuenyo akpọchi. Mgbe ị na-ahụ a ọhụrụ ngosi abịarute, ị nwere ike swipe ọ horizontally elu ma ọ bụ ala iji obiọma ya. N'ezie, ị na-enwe ike enweta ya ugboro abụọ na-emeghe ya na-emeso ya, dị ka replaying a ozi ederede. Ọ na-arụ ọrụ ahụ dị ka na ihe iPhone na iOS 8.
* Atụmatụ 5: Android Doo
Android 5.0 Lollipop na-eme ka Android Doo-arụ ọrụ maka oge mbụ. Ọ na ndị ọzọ ma ọ bụ obere ka na-ekere òkè faịlụ n'etiti 2 kọmputa. Ị dị nnọọ mkpa na-emeghe a faịlụ na enweta na òkè icon> mgbata 'Android Doo'> ka ọzọ Android ngwaọrụ megide mbụ ngwaọrụ azụ na Ị kpọghee ekwt ya> mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ faịlụ ndị ọzọ bụ na ngwaọrụ ọzọ.
* Atụmatụ 6: melite a tụkwasịrị obi ngwaọrụ Bluetooth
Na-ewere na nche nke gị gam akporo ngwaọrụ echiche, i nwere ike na-Bluetooth atụmatụ ekpochi ruo mgbe ị mkpa jikọọ ya na a ntụkwasị obi ngwaọrụ. Ọ dị mma. Otú ọ dị, ị ga-ugboro ugboro na-emefu oge Ụzọ ya na a tụkwasịrị obi ngwaọrụ mgbe ị kwesịrị jikọọ 2 ngwaọrụ ọnụ. Android 5.0 Lollipop na-eme ka ya n'ihi na ị melite a tụkwasịrị obi Bluetooth ngwaọrụ, n'ihi ya, mgbe a tụkwasịrị obi ngwaọrụ bụ ihe fọrọ nke nta, ọ ga-paired gị Android ngwaọrụ-akpaghị aka: System Ntọala> mgbata 'Nche'> Tọọ a paswọọdụ igbachi ihuenyo> mgbata 'Smart mkpọchi'> 'Tụkwasịrị Obi ngwaọrụ'> enweta na '+' na-eso kpaliri ejikọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ụgbọ ala stereo, smartwatch, ma ọ bụ ihe ọzọ.
Top 7 Free na Online Android Emulators maka PC